Ejikọtara ọnụ nri nri China, Line Feeder Line, kọlụm ndị na-ahụ maka nri, kọmpụta ndị na-enye ihe oriri
Nkọwa:Ejikọtara Nweta Mkpịsị Mgbakọ,Mpempe akwụkwọ Ngwaọrụ,Kọlụm nri nri,Ndị na-enye nri Cost Straightener,Ngwunye Ngw’oru oru,Pịa Feeding Line
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener Feeder > Inye Nri na Ngwunye Aka
Ngwaahịa nke Inye Nri na Ngwunye Aka , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Ejikọtara Nweta Mkpịsị Mgbakọ , Mpempe akwụkwọ Ngwaọrụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Kọlụm nri nri R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ndị na-enye Servo na Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Press Room NC Leveler Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
4 n'ime 1 Straightener Feeders  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye nri 3-IN-1  Kpọtụrụ ugbu a
Ndị na - enye nri Cost - Straighteners  Kpọtụrụ ugbu a
Metal Press Coil Straightener Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Servo Feeder Uncoiler Leveler  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye ihe n'ọkpụkpụ metal  Kpọtụrụ ugbu a
Nhazi 3 Na 1 Onye Nri  Kpọtụrụ ugbu a
Automation Press Servo Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Inye nri na 3 n'ime 1  Kpọtụrụ ugbu a
Decoilers Straighteners Servo Roll Feeders  Kpọtụrụ ugbu a
Onye na-enye nri Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwunye eriri igwe na-aga-abuo  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener Servo Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwakọta nri na kọmpat  Kpọtụrụ ugbu a
3 Na 1 Nweta NC Servo Straightener Feeder  Kpọtụrụ ugbu a
Kọlụm nri nri  Kpọtụrụ ugbu a
NC Servo 3 Na 1 Straightener Feeder Uncoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Usoro a na-agbakọ obosara na SpaceMaster bụ nke adịghị edozi, ịgbatị, na inye nri dị mma maka ngwa mgbochi. Ngwunye eriri igwe akpọrọ SpaceMaster jikọtara ọrụ atọ nke ịhapụ, ịgbatị, na inyeju ngwaahịa coil n'ime otu igwe. Ndokwa a na-eme ka inye...
Ndị na-enye Servo na Straightener
SERVO FES DERS IHE Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed, decoener, na -...
Press Room NC Leveler Feeder
AKUKO Roo M NC larịị LER feeder Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed,...
4 n'ime 1 Straightener Feeders
4 NA NKE TBỌCHA IWU EGO Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed, decoener, na...
Ngwunye nri 3-IN-1
3-IN-1 PRE SS FECHING MCHINE Mayflay na-enye ọtụtụ ụzọ dị iche iche ga-esi mejupụta ihe niile dị n'ahịa n'ụlọ ọrụ ụlọ na-akpụ akpụ na ụlọ ọrụ mpempe akwụkwọ. `lọ ọrụ ya nwere nnukwu ụlọ na - arụ ụlọ na - akpaghị aka kọmpat coil feed,...
Ndị na - enye nri Cost - Straighteners
AKILKỌ EGO Eriri igwe Feeders - Straighteners bụ na obere ohere imewe karịsịa mepụtara izute mkpa nke ndị ahịa na-agaghị ezu ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana...
METAL MET COTA COILIGHA ENER FEEDER Metal eriri igwe Press Straightener feeder bụ na obere ohere imewe karịsịa mepụtara izute mkpa nke ndị ahịa na-agaghị ezu ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba...
SE RVO FE ED ER UNCOI LER LEV ELER Ndị ọrụ Servo Feeder Uncoiler Leveler dị na mkpụmkpụ ohere a haziri nke ọma iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta...
Onye na-enye ihe n'ọkpụkpụ metal
Metal eriri igwe nnennen ENER feeder Ndị na-ahụ maka ọla bụ ihe dị na mbara igwe dị mkpụmkpụ iji mepụta mkpa ndị ahịa na-ezughi oke. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana...
Nhazi 3 Na 1 Onye Nri
NSOGBU NKE 3 N’IME EGO Nhazi 3 Na 1 Ndị na - ahụ maka nri dị na oghere dị mkpụmkpụ ka emepụtara ka o wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ...
AUTOMA TION PRE SS SER VO FEEDER Ndị na-ahụ maka ngwa ahịa Akụrụngwa Saịtị dị na mkpụmkpụ oghere ka emepụtara iji gboo mkpa ndị ahịa na-enweghị ohere zuru ezu. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka...
AUTO FEEDER 3 NA 1 Nchekwa onwe 3 n'ime 1 dị na mkpụmkpụ ohere imewe ka emepụtara ka o wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana...
DECO I LER STRAIGH TENERS SERVO R OLL FEEDERS Ndị na-ahụ maka ihe ndozi bụ ndị eji eme ọhụụ oghere dị na mkpụmkpụ oghere ka ejiri wee gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba...
STRAIGHT ENER SER VO FEEDER Straightener Servo Feeder dị mkpụmkpụ ohere a haziri emebe iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka...
Ngwunye eriri igwe na-aga-abuo
ALL-IN- ONE COIL FE ED LINE All-na-otu eriri igwe oriri akara bụ na obere ohere imewe karịsịa mepụtara izute mkpa nke ndị ahịa na-agaghị ezu ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta...
Decoiler Straightener Servo Feeder nọ na mkpụmkpụ ohere imewe ka emepụtara nke ọma iji gboo mkpa ndị ahịa n’enweghi ohere. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka nhazi...
Kọmpat eriri igwe Ịnụrụ Lines na Short Space Design-họọrọ ga-eji bụrụ na nke naanị obere dị ohere dị ka nke ọma dị ka bụrụ nke na-erughị siri eriri igwe ihe onwunwe na nnukwu ihe onwunwe square. A na-ejikarị ha ogologo oge ogologo nke etiti na...
3 Na 1 Nweta NC Servo Straightener Feeder
Mkpịsị akwụkwọ nri na Design oghere. Azịza dị ọnụ ahịa. 3 n'ime 1 NC servo akpaka mpempe akwụkwọ coem stamping feeder machine decoiler straightener feeder maka ụgbọ ala chassis akụkụ mmepụta ahịrị Mayflay 3 na 1 ụgbọ ala mapụtara n'ihu kọlụm...
Mayflay 3 na 1 ụgbọ ala mapụtara n'ihu kọlụm stiffene akụkụ punching system decoiler straightener cum NC Servo feeder maka auto akụkụ mmepụta ahịrị 3 n'ime 1 NC servo akpaka mpempe akwụkwọ coem stamping feeder machine decoiler straightener...
NC Servo 3 Na 1 Straightener Feeder Uncoiler
E mepụtara eriri nri Mayflay jikọtara ọnụ na oghere dị mkpụmkpụ iji gboo mkpa ndị ahịa na-enweghị ohere zuru ezu. Ha na-enye ntụkwasị obi nke usoro ọbụna maka ihe ndị kachasị achọ. Ha na-adaba adaba maka imepụta akụkụ akụkụ yana maka nhazi nke ihe...
China Inye Nri na Ngwunye Aka Ngwa
Nri ma eriri igwe Ijikwa Equipment e mere na-eme ka ndị mkpa efere nke metal mpempe akwụkwọ stamping akụkụ.
The classic ndokwa: eriri igwe udia na sere na-apụ eriri igwe decoiler, Straightener na agbanwe ọsọ mbanye, eriri igwe loop na Servo Roll ndepụta. Usoro zuru oke maka ngwaahịa dị oke mkpa, obere ahịrị & chekwaa ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ọsọ ọkụ ma ọ bụ mmepụta kachasị ike.
Ọ nwere ike inye obosara ihe mkpuchi mpempe akwụkwọ site na 300mm ruo 800mm na ọkpụrụkpụ mkpuchi site na 0.3-3.0mm, eriri coil dị elu ruo 3000kgs.
Ngwongwo inye nri & igwe ihe kwesiri ekwesi maka ihe ndozi akụrụngwa, ngwa eletriki na stamping ihe ulo, komputa komputa na wdg.
Ejikọtara Nweta Mkpịsị Mgbakọ Mpempe akwụkwọ Ngwaọrụ Kọlụm nri nri Ndị na-enye nri Cost Straightener Ngwunye Ngw’oru oru Pịa Feeding Line Nweta Mkpịsị Mkpọaka Mpempe akwụkwọ Mpempe Mkpịsị Ngwaọrụ